Ikhaya > Izindaba > Izindaba zezimboni > Ukwethulwa kwemikhiqizo yeplastiki ye-PC
I-Polycarbonate PC iyi-polyester e-carbonated eqondile lapho amaqembu e-carbonated ahlelwe ngokushintshana namanye amaqembu angahle abe yiphunga, i-aliphatic, noma womabili.
Imikhiqizo ye-PC isikhunta inokumelana okuhle nokushisa, ukushisa kokusebenzisa isikhathi eside kungafinyelela ku-130â „ƒ, futhi kunokumelana okuhle nokubandayo, ukushisa kwe-embrittlement kwe -100â„ ƒ. I-PC ayinaphuzu lokuncibilika elisobala, ngo-220-230â „ƒ isimo sasibhakiwe, ngenxa yobulukhuni bamaketanga amakhulu, i-viscosity encibilikayo iphakeme kunamanye ama-thermoplastics.
Izici zemishini ye-
Imikhiqizo ye-PC isikhunta inezakhiwo ezinhle kakhulu zomzimba nezomshini, amandla womthelela omuhle kakhulu, ukuzinza okuhle okuyisilinganiso, isengagcina amandla aphezulu emishini emazingeni okushisa aphansi; Kodwa-ke, amandla okumelana nokukhathala aphansi, ukuqhekeka kwengcindezi kulula ukwenzeka, nokugqokwa Ukumelana akulungile.I-PC engaguquliwe ayinambala futhi isobala, futhi inokukhanya okuhle kokubonakalayo okubonakalayo.
Imikhiqizo ye-PC isikhunta izinzile kwimidiya ye-asidi neyamafutha, kepha hhayi ukumelana ne-alkali, encibilikayo ekhiqizweni kwe-chlorine.PC inokumelana okuhle kwe-hydrolysis, kepha ukucwiliswa kwesikhathi eside emanzini abilayo kulula ukudala i-hydrolysis nokuqhekeka, akunakusetshenziswa ekuphakameni okuphakeme Imikhiqizo ye-steam yengcindezi.PC ingabanjwa ngamanye ama-solvents we-organic, yize ingamelana nama-acid abuthakathaka, ama-hydrocarbon e-aliphatic, isisombululo se-alcohol, kepha ingaqedwa kuma-solvents organic aqukethe i-chlorine.
Kulula ukukhipha into enobuthi i-bisphenol A, eyingozi emzimbeni womuntu. Ungayisebenzisi ekushiseni noma elangeni eliqondile.
Kwedlule:Isingeniso kumikhiqizo yepulasitiki yasendlini
Olandelayo:Izinto zokwakha ezidingekayo ekwenzeni isikhunta sepulasitiki sokusetshenziswa kwasendlini